Sida loo daabaco miiska Excel si sax ah - Talooyin - LACAG LA'AAN
ACCUEIL » QODOBO Sida loo daabaco miiska Excel si sax ah - Talooyin
Sida loo daabaco miiska Excel si sax ah - Talooyin
Haddii ay waajib kugu tahay inaad horay u daabacato warqad-warqadda Excel waagii hore, markaa waad ogtahay in helitaanka miis aad u weyn warqad hal mar mararka qaar ay tahay mucjiso. Inta badana, waxaa nalooga tagay dhowr waraaqood oo daabacan oo ay tahay in la soo qaado. Runtii ma aha wax la taaban karo oo weliba, Excel wuxuu dhibaatadan ku xalliyaa dhowr gujin oo leh isbaddallo dhowr ah oo ku saabsan cabbirka daabacaadda. Farsamo wax ka badali doonta aragtidaada Excel!
Sida loo daabaco xaashiyahaaga warqad hal warqad ah
Ka bilow adoo furaya faylka aad rabto inaad daabacato. Liiska xuubka, guji tab faylka.
Daaqadda hadda dhacey, guji badhanka Daabacaadda dhinaca barta menu-ka. Waxaad si dhakhso leh uga heli kartaa furaha furaha Ctrl + P. Ka dib, bogga hadda uun furan, riix iskuxirka Lakabka qeybta ugu hooseysa.
Sanduuqa wada hadalka bogga ayaa la furi doonaa. Boggii ugu horreeyay, oo si toos ah u furmaya, sax saar ikhtiyaarka Isku-habeynta ee qaybta iskeelka, halka aad uga tageyso bogga 1 ballaca bogga 1 ee hauteur. Haddii miiskaagu leeyahay tiirar ka badan safka, waxaad u dooran kartaa Landscape qaybta hanuuninta.
Kadib guji tabinta Margins, iyo cHubi xulashooyinka si toos ah iyo si toos ah qaybta Xarun bogga. Waxaad kaloo yareyn kartaa xuduudaha si aad ugu keydiso meel ku taal xaashida daabacaadda.
Kadib riix OK ku noqo qaybta daabacaadda. Muuqaal hordhac ah oo dukumintigaaga ah ayaa soo bixi doona waadna daabici doontaa haddii aad ku qanacsan tahay natiijada.
Haddii qurxinta qoosku aysan kaa cabsi gelin, ogaada taasi Waxaad sidoo kale dejisan kartaa qaanadda laga soo dejinayo tabinta tabinta ee taban ee Ribbon Menu.
Waa tan sida miisaanka loogu lumiyo si dabiici ah iyadoo aan la cunin - HEALTH PLUS MAG
Xullo dembiga aad jeceshahay oo soo arag waxa ka muujinaya shakhsiyaddaada qarsoon - SANTE PLUS MAG
Le COUP DE GUEULE de Ronaldo – La Quotidienne Mercato #31 – VIDEO